Fampiroboroboana ny fandraharahana :: Hotohanana ireo kaoperativa manerana ny Nosy • AoRaha
Fampiroboroboana ny fandraharahana Hotohanana ireo kaoperativa manerana ny Nosy
Misandrahaka amin’ny lafiny maro ny anjara asan’ny fandaharanasa Fihariana. Isan’ireo hahazo fanampiana ireo kaoperativa manerana ny Nosy, araka ny tetibola voafaritra ao amin’ny fandaharanasa Fihariana nampahafantarina, omaly, teny Ankorondrano. Amin’ny alalan’ny tolotra “Zara iombonana” no hizarana fitaovana amin’ireo kaoperativa manerana an’i Madagasikara mba hahafahan’izy ireo mamokatra betsaka kokoa ary hamoahany kalitao manaraka ny fenitra.
Fantatra fa manodidina ny 80%-n’ny mponina eto Madagasikara no mipetraka any amin’ny tontolo ambanivohitra ary mivelona ao anatin’ny fambolena sy fiompiana. Hiompana amin’ny lafiny roa izao fanampiana ny kaoperativa izao: “Hisy ny fanohanana ara-pitaovana sy teknika, ary ny tan-tsoroka ara-bola. Hanokanana olona roa mandritra ny herintaona isaky ny kaoperativa, izay hanampy amin’ny fitantanana ny Zara iombonana sady hanofana amin’ny fampiasana fitaovana”, hoy Zafindravaka Valérie, sekretera mpanatanteraka ny fandaharanasa Fihariana.
Fiaraha-miasa eo amin’ny minisiteran’ny Varotra, ny Indostria sy ny asa tanana sy ny minisiteran’ny Fiompiana, ny fambolena ary ny jono ary ny Sampan-draharahan’ny Firenena Mikambana momba ny fampandrosoana (Onudi) izao fanampiana ny kaoperativa izao, taorian’ny fifanaovan-tsonian’ny fifanaraham-piaraha-miasa,omaly.
Fanohanana amin’ny tsy miankina :: Nomen’ny GEM vola tsy averina ireo mpiasa naato ara-teknika